jpy oovimba-Funda ukurhweba
I-USD, i-JPY, kunye ne-CHF ePhantsi, ukuZithemba koMtyali-mali okuKhuphukayo kukhulisa i-Euro
Kwiimarike zanamhlanje ezizolileyo, i-USD, i-JPY, kunye ne-CHF zonke ziwile ngokuthozama. I-Euro ixhaswa yidatha yemomod yemarike engcono-kunokuba ilindelwe, ngelixa i-Sterling iphucula ngokunjalo. I-Eurozone Sentix Ukuzithemba kwabatyali-zimali I-Index inyuke ukusuka kwi-16.9 ukuya kwi-18.3 ngoNovemba, iphantsi kancinci kune-18.6 elindelekileyo. Oku kwakhona ukunyuka kokuqala ukususela ngoJulayi. Nangona kunjalo, isalathisi seemeko zangoku sehla ukusuka kwi-26.3 ukuya kwi-23.5, ephantsi kakhulu ukususela ngoJuni. Ngakolunye uhlangothi, kulindeleke ukuba kunyuke ukusuka kwi-8.0 ukuya kwi-13.3.
USantix uthe ukudodobala koqoqosho "iya ekupheleni." Okulindelweyo kwezoqoqosho kubonisa ukuba ukwehla kwamva nje kuku "Ukwehla phakathi komjikelo." “Le ngxabano ibonakala ingqinwa yidatha kaNovemba. Ke ngoko, isoyikiso sokunyuka kwezoqoqosho singaphandle kwengxoxo. ” E-Switzerland, izinga lokungasebenzi lihle ukusuka kwi-2.8% ukuya kwi-2.7% ngo-Oktobha, ngokuhambelana nokulindela.
Kwisishwankathelo sezimvo ezivela kwintlanganiso ye-27-28 ka-Oktobha yeBhanki yaseJapan, kwachazwa ukuba ngenxa yokunyuka kwamaxabiso aphantsi, nokuba imfuno ecinezelweyo iyanyuka, kuyimfuneko ukunamathela kumgaqo-nkqubo wemali oxekethileyo. Ukongeza, iBhanki yaseJapan kufuneka "ibambelele kumgaqo-nkqubo okhoyo wokunciphisa imali" ukuze" ukunyuka kweengeniso zenkampani kukhokelele ekunyukeni kwemivuzo kunye nokomeleza umjikelo olungileyo ukusuka kwingeniso ukuya kwinkcitho.
Ku “ukunciphisa iziphumo zokuwohloka kwemiqathango yorhwebo”, kuyimfuneko ukuphucula imisebenzi yezoqoqosho kunye nokunyusa ukulindela ukunyuka kwamaxabiso ukuze "Iinkampani zinokugqithisa ngokutyibilikayo ukunyuka kwamaxabiso ezinto ezibonakalayo kumaxabiso entengiso yasekhaya." Into ebalulekileyo kukuba "cutha isithuba semveliso" ukuba "ukuququzelela ukuhanjiswa kokunyuka kwamaxabiso."
I-USD, i-Yen iRetreats kwiiMarike ezizolileyo
Ukuhla kwexabiso le-JPY kubonisa "umahluko kumazinga okunyuka kwamaxabiso kunye nokuma komgaqo-lawulo wemali phakathi kwezoqoqosho." Kubalulekile ukuqwalasela impembelelo yokunyuka kwamaxabiso eemveliso zamazwe ngamazwe kunye nokuhla kwexabiso le-JPY. Nangona kunjalo, kuyimfuneko ukukhumbula ukuba impembelelo yabo kwiqumrhu ngalinye lezoqoqosho iyahluka ngokweshishini kunye nobukhulu.
I-USD inikezele ngezikhundla ezithile ngoMvulo ozolileyo. Ekuqaleni kweveki, i-China yabika i-surplus yorhwebo lwerekhodi, kodwa ukukhula kokungenisa kumazwe angaphandle kwakungaphantsi kunokuba bekulindelwe, kwaye ukuthengwa kweoli kunye neembotyi zesoya kwehla kakhulu.
Uninzi lwabenzi bomgaqo-nkqubo be-Fed bathethe ngeziganeko ezahlukeneyo, nangona umgaqo-nkqubo wemali ukhankanywa ngokungaqhelekanga. U-Vice-Chair-sihlalo uRichard Clarida uthe i-benchmark yokunyuka kwamaxabiso inokufikelela ekupheleni kwe-2022, kodwa wongezelela ukuba i-Fed isekho. “umgama othile” ukusuka ekucingeni ukunyusa amazinga enzala, esongeza ukuba ulindele ukubuyisela ngokupheleleyo i-USD kwiNqanaba lengqesho yangaphambi kobhubhane ukuya ekupheleni kuka-2022.
tags kunye neCHF, i-JPY, iUSD
Ukulungiswa kwe-USD / JPY kunokuba ngaphezulu!
I-USD / JPY ithengisa ngokubomvu kwi-111.08 ngalo mzuzu wokubhala. Ityibilikise ezantsi kuphela ngenxa yokuba i-DXY kunye ne-JP225 yehle kancinci. Isibini semali sichaze ukuba isigaba sokulungisa singagqitywa, kungoko sinokukhangela amathuba amade amatsha.
Emva kwexesha, i-PMM yeeNkonzo ze-ISM kulindeleke ukuba yehle ukusuka kumanqaku angama-61.7 ukuya kumanqaku angama-59.9. Ukongeza, iBhalansi yoRhwebo kunye neeNkonzo zokuGqibela ze-PMI ziya kukhutshwa ngokunjalo. Ingcono kunokuba bekulindelwe idatha yase-US inokunyusa i-USD kwaye inokutyhala i-USD / JPY ngaphezulu.
I-USD / JPY ifumene inkxaso kumgca we-150% weFibonacci wefolokhwe enkulu eyehlayo, kanye ngezantsi kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-38.2% kwaye ngoku izama ukubuyela phezulu. Ngoku, ifumene ukunganyangeki okwethutyana kwinqanaba leepivot ngeveki (111.22).
Ukuzinza ngaphezulu komgca ophakathi wefolokhwe kunye nokwenza indawo ephezulu ephezulu kunokubonisa ukukhula okuqinileyo ngaphambili. Okwangoku, ndiyakholelwa ukuba kuphela kukuqhekeka okusebenzayo emzimbeni wefolokhwe okunokuthi kusebenze ukukhula okubalulekileyo, ukuphakama komlenze.
Ukusilela ukuzinzisa phantsi komgca we-150% weFibonacci kwaye ngaphantsi kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-38.2% kubonise ukuba i-USD / JPY igqibile ukulungiswa kwayo.
tags Forex, Forex Analysis Technical, i-JPY, ukuseta urhwebo, iUSD, USDJPY
Ukuwa kwe-JPY njengeNtembelo yoTyalomali kuTshintsha uBullish
Ukulandela ukubuyiselwa komngcipheko wokutya, i-JPY yehle kabukhali, ngelixa idola yenqabile nayo. Ngenzuzo eyomeleleyo kwizalathiso zaseMelika ngobusuku obunye, ukuzithemba kotyalo mali kutshintshe kakhulu. EAsia, i-Nikkei ifumene isibambo se-30k, ngelixa ezinye iimakethi zaseAsia zibuthathaka. Iimali zezinto eziphathekayo, ngakolunye uhlangothi, zenze inzuzo ebalulekileyo. I-JPY ngoku yimali esebenze okona kubi kule veki, ilandelwa yiSterling. Franc yaseSwitzerland yeyona mali inamandla, ilandelwa yiDola yaseCanada.
Nangona kunjalo, imeko inokutshintsha ngokuphela kweveki. ZaseJapan NgoSeptemba ukuvelisa isalathiso sabaphathi bezinto zokuthenga kwehla kwi-51.2 ukusuka kwi-52.7, eyayisezantsi kune-52.5 eyayilindelwe. Isalathiso seshishini le-PMI sonyuka ukusuka kwi-42.9 ukuya kwi-47.4. Isalathiso sokudityaniswa kwe-PMI sikhuphukile ukusuka kwi-45.5 ukuya kwi-47.7.
U-Usamah Bhatti, ingcali yezoqoqosho kwi-IHS Markit, uthe: “Izinga lokuhla lihamba kancinci kunango-Agasti kuba uxinzelelo kushishino lweenkonzo ezinkulu luye lwehla kakhulu… Amaxabiso okufaka izinto kumashishini abucala anyuke ngeyona minyaka ikhawulezayo kwiminyaka eli-13. Kwimeko yokunqongophala konikezelo ngeenkonzo, iinkampani zithi olu nyuso lonyukile ngenxa yezinto ezingafunekiyo, uthutho neendleko zabasebenzi. ”
Kwakhona isuka eJapan, eyona CPI isisiseko (zonke izinto ngaphandle kokutya okutsha) ngo-Agasti inyuke ukusuka -0.2% ukuya ku-0.0% unyaka nonyaka, ngokuhambelana nokulindelweyo. I-CPI iyonke (zonke izinto) yehle ukusuka -0.3% ngonyaka-ukuya -0.4%. I-CPI-core-core (zonke izinto ngaphandle kokutya okutsha kunye namandla) zinyukile ukusuka -0.6% unyaka nonyaka ukuya kwi -0.5%.
I-JPY: Yaphula i-USD / JPY nge-112.40 ngoMeyi ubonise indlela eya phezulu
I-USD / JPY ibonise ukonyuka okunamandla okuphezulu ngenxa yesiphumo sokukhusela ngempumelelo ixabiso lamaxabiso kwi-109.12 / 11 emva koko "usuku lwangaphandle" oluqinisekileyo. Abahlalutyi balindele ikhefu elingaphezulu kwe-Agasti ephezulu ye-110.81 kumceli mngeni wokuxhathisa ixesha elide, oqala nge-111.66 ukuya kuthi ga kwi-112.40.
Njengokuba isivuno sethu sizalisekisile inkxaso yexesha elikufutshane kwaye sinokunyusa ngaphezulu, abahlalutyi balindele ikhefu ngaphezulu kwe-Agasti ephezulu ye-110.81 yokongeza amandla kwi-rally kunye nokuseta inqanaba lovavanyo lokuchasana nexesha elide, eliqala nge-111.66 kwaye ifikelela kwi-112.40.
Ngelixa uxhathiso lwe-112.40 kufuneka luhlonitshwe, ikhefu liyakubonisa ukugqitywa kwesiseko esibaluleke ngakumbi nesibanzi, sibonisa utshintsho oluzinzileyo lwendlela ephezulu. Inkxaso yokuqala ingena kwi-110.25, nge-avareji yeentsuku ezingama-55 kunye nezisezantsi kutsha nje kwi-109.90 / 76 yokubamba ukugcina umngcipheko okhoyo kwangoko uphezulu.
I-GBP / JPY yandisa ukukhula kwayo ngaphakathi kweChannel ephezulu!
I-GBP / JPY ihlanganisiwe namhlanje njengoko i-Nikkei ikwazile ukwanda. Sinolwalamano oluqinisekileyo phakathi kwezi zimbini. Esi sibini sasinyuka ngaphandle kwentshukumo yaso ecaleni. Ngoku, ikwazile ukwaphula ngaphezulu kweendawo eziphezulu ezazibonisa abathengi abomeleleyo.
Iponti yase-Bhritane ifumene uncedo kwi-PMI yokuGqibela yokuThengisa. Isalathi sezoqoqosho sonyukile ukusuka kuma-60.1 ukuya kuma-60.3, sibetha uqikelelo lwama-60.1 olubonisa ukwanda. IJapan Yen yehle ixabiso xa ithelekiswa nazo zonke izitha zayo nokuba iMveliso yokuGqibela ye-PMI inyukile ukusuka kuma-52.4 ukuya kuma-52.7.
I-GBP / JPY ihambile macala ujikeleze umgca we-pitchfork's median line (ML). Ibhalise irali eyomeleleyo emva kokuphinda uzame kwakhona umgca wendlela. Yehlile kancinci kwiiyure zokugqibela ukubuyisa i-151.59 yangaphambili.
Eyona nto kujoliswe kuyo ngokukhawuleza ibonwa kwi-R1 yeveki (152.00). Ukwenza uqhawulo olusebenzayo ngaphezulu kokuxhathisa okungagungqiyo, ukuphakama okuphezulu okuphezulu, kubonisa ukukhula okungaphaya.
Ukuqhekeka okukhohlakeleyo ngokunyuka okuphezulu kwangoko kubonisa ukuqhubeka okungaphezulu. Ngokobuchwephesha, umgca wejelo elingezantsi ujongwa njengeyona nto kujoliswe kuyo.
tags Pound yaseBrithani, Forex, GBPJPY, i-JPY
I-GBP / JPY imiqondiso yokuqhekeka okungeyonyani ejonge ngxi kwi-Momentum!
I-GBP / JPY ibonakala ingagqitywanga kwixesha elifutshane emva kokufikelela kwi-154.82 ephezulu. Isibini sihamba ecaleni sibonisa iimpawu ezigqithisileyo. Okwangoku, i-bias iyakhula, ngenxa yoko ngaphambi kwexesha ukuthetha malunga nenqanaba lokulungisa elinamandla.
Kuhleli ukubona ukuba kuya kwenzeka ntoni ngexesha elifutshane. I-JP225 (Nikkei) ihlala iphezulu kwaye ukukhula okunokubakho kunokunceda i-GBP / JPY inyuse ngakumbi. Kwelinye icala ukuthengisa kukaNikkei kunokubonisa inqanaba lokulungisa elinamandla kwesi sibini.
I-GBP / JPY H4 Itshathi yohlalutyo lobuGcisa!
I-GBP / JPY yindawo engathathi hlangothi icinezela umgca wokwenza uptnd. Yaliwe kwakhona yipivot point yeveki (154.14) ebonisa abathengisi abomeleleyo kwixesha elifutshane. I-bias isashukunyiswa ngokukhawuleza ukuba ihlale ngaphezu kwe-153.76 inkxaso engapheliyo.
Ukuqhekeka okungaphantsi kunokungasebenzi nanini na ixesha ukuba uhlala ngaphezulu kweli nqanaba. Kwakhona, i-153.41 kunye ne-S1 (153.45) zibonwa njengamanqanaba enkxaso abalulekileyo. Ukubhalisa ukwahlulwa okusebenzayo ngale miqobo isezantsi kunokubhengeza ukwehla okukhulu.
I-bias iyaqhubeka nokunyusa nangona ihla ngoku. Ukuqhekeka okukuko ngentla komgca wokutyibilika ongaphandle (sl) wokuhla kwefolokhwe kunokuvula amandla okomeleza. Ngokwenyani, ukuphakama okuphezulu okuphezulu, ukuvalwa kwe-bullish ngaphezulu kwe-154.44 kunokusizisela ithuba elifanelekileyo lokuthenga.
tags IGBP / JPY, i-JPY, Nikkei, Umbono woRhwebo
I-USD / JPY yokuqhekeka ecaleni ethandwayo!
I-USD / JPY yehlile kwakhona kwixesha elifutshane kodwa i-bias ihlala ikhula emva kokwaliwa kwangezolo kwindawo yokuhlangana. Kuthengiswa ngo-108.98 ukuzama ukubuyela phezulu nokucima ilahleko zanamhlanje.
Mhlawumbi i-Dola yaseMelika iyakuphinda ikhokele kwakhona ukuba amabango e-US yokungasebenzi aza kuqhubeka nokuhla. Isalathi sezoqoqosho kulindeleke ukuba sehle ukusuka kwi-473K ukuya kwi-453K kwiveki ephelileyo. Ukukhula kwe-DXY kwixesha elifutshane kunokunceda i-USD / JPY inyuke phezulu, nokuba i-JP225 (Nikkei) ihlala i-bearish.
I-USD / JPY H4 Itshathi yohlalutyo lobuGcisa!
I-USD / JPY isilele kwakhona ukuzinzisa ngaphezulu kwe-pivot yeveki (109.15) kwaye ngoku iphinda iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde ihlaziye i-50% yeFibonacci. I-bias isashukunyiswa ngokukhawuleza ukuba izinga lihlala ngaphezu komgca wokunyuka.
Ndikuxelele kuhlalutyo lwevidiyo izolo ”I-USD / JPY yokuThengisa indawo yokuThengisa”, I-USD / JPY inokukhulisa ukujiya okuphezulu ukuba indawo yokuhlangana iyala ixabiso. Uyabona ukuba esi sibini sifikelele kwindawo yokuhlangana kodwa sivalile ngaphezulu kwayo sibonisa ibango elinamandla.
Ukuhlala ngaphezulu komgca wonyuso kunye nokwenza uqhawulo olusebenzayo ngaphezulu komgangatho ophezulu we-median (uml) kunokuvula intshukumo ephezulu. Indawo ephezulu ephezulu inokuzisa abathengi abaninzi kumdlalo.
tags i-JPY, Umbono woRhwebo, iUSD, USDJPY, yen
I-AUD / JPY encinci encinci ephezulu
I-AUD / JPY ifikelele kwindawo yokuchasana ngokuqinileyo kwaye ngoku inokuphinda yehle kwakhona kwixesha elifutshane. Ngaba ukurhweba ngombala obomvu kwinqanaba le-85.00 yengqondo. Ukubhalisa isezantsi esitsha kunokuvula ukuthengisa.
I-Aussie ibonakala ibuthathaka emva kweMizuzu yeNtlanganiso yoMgaqo-nkqubo wezeMali. I-Yen yaseJapan ingathatha ulawulo olupheleleyo ukuba i-JP225 (Nikkei) iqala ukwehla kwixesha elifutshane.
Uhlalutyo lwetshathi lwe-AUD / JPY H1!
I-AUD / JPY ifumene uxhathiso olomeleleyo ngaphezulu kwepivot yeveki (85.05) kwaye ngoku ibonakala inzima kwakhona. Ukulahla kunye nokuvala ngezantsi kwe-84.95 ephantsi kwangoko kunokubonisa ukwehla okwexeshana
Ndizobe ifolokhwe encinci yokuhla ngethemba lokuba ndiza kuyifumana intengiso emva kokuba i-AUD / JPY iprinte iphethini yokubuyela umva encinci. Esi sibini sishicilele ukuqhekeka okungeyonyani ngaphezulu komgangatho ophezulu we-median (uml) oqinisekisa umgca ophezulu we-median (uml) njengamandla oxhathiso.
Ukusilela kwayo ukuzinzisa ngaphezulu kwenqaku le-pivot (i-85.05) yeveki nganye kubonise ukwehla kwexesha elifutshane. I-AUD / JPY inokuya kumgca ophakathi we-pitchfork (ML) ukuba uhlala ngaphakathi komzimba omncinci wefolokhwe.
tags Aud, AUDJPY, Aussie, i-JPY
Ukulungiswa kwe-EUR / JPY kunokuphela kungekudala!
I-EUR / JPY yayikwinqanaba lokulungisa emva kokufikelela kwinqanaba le-132.36. Inqabile kangange-130.98 apho ifumene inkxaso kwakhona. Ngoku ibuyile ukutsiba ngaphezulu komgca wokudodobala kwangoko ukubonisa ukuba ujingi olusezantsi lunokudlula.
I-Euro inokuphinda iqhubeke nokuxabisa ukuba ii-odolo zaseJamani zaseFektri kunye neeNtengiso ze-Euro-zone ziya kuhamba ngokuhambelana noko kulindelweyo okanye ngcono. Ngokobuchwephesha, kusafuneka silinde isiqinisekiso ngaphambi kokuhamba ixesha elide kwesi sibini. Uxinzelelo lusephezulu emva kokuhla okwethutyana kukaNikkei.
Uhla lwe-EUR / JPY H4 Uhlalutyo lobuGcisa!
I-EUR / JPY ifumene inkxaso kwinqanaba le-130.97 kwaye ngoku icinezela i-pivot yeveki (131.31) kunye nenqanaba lama-38.2%. Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezulu kwala manqanaba kunokubonisa ukukhula okungaphambili.
Ukusilela kwayo ukufikelela kumgca we-pitchfork's median line (ML) imiqondiso yokuba isibini sinokubuya sibuyele siphezulu kumgca ophezulu we-median (UML). Nangona kunjalo, i-EUR / JPY inokuhamba ecaleni kwixesha elifutshane ngaphambi kokuphuhlisa i-swing entsha ephezulu.
Ukwalelwa kwinqanaba lokuphinda kubuyiselwe kwi-50% elandelwa kukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwepivot yeveki, ukuphakama okuphezulu, kunokubonisa intshukumo entsha yokujonga phezulu. I-EUR / JPY iya kunyuka ukuba i-JP225 iya kuqhubeka nokukhula kwayo.
tags i-eur, EURJPY, i-JPY, Umbono woRhwebo